युवा र समाज कता जादैछ ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
युवा र समाज कता जादैछ ?
म एक युवा। म जस्तै लाखौं युवाहरु मेरो देशमा छन्। युवाहरुमा देश बनाउने सपना हुन्छ। आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने इच्छा हुन्छ। भविष्यको मिठो पलहरुको परिकल्पना हुन्छ।
स्वतन्त्रताको कति सदुपयोग र दुरुपयोग के गर्दैछु भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुनु पर्दछ। आफ्नो भविष्यको लागि आफैले बुझेर बुझेर नयाँ गोरेटो कोर्न सक्नुपर्दछ। ठीकलाई ठीक र गलत लाई गलत भन्ने अवस्थामा पुग्नु कहिल्यै पछि हटनु हुदैन। युवाले नै सहि गलत पहिचान गर्न नसक्ने हो भने देशले गति लिन सक्दैन। हामी अहिले पनि कुनै कुरालाई गलत र कुनै कुरालाई ठीक भनेर सामाजिक सञ्जाल देखि चिया पसलमा बसेर भनि रहेका त हुन्छौ नै। तर, नपढिकन, नबुझिकन हचुवाको भरमा। फलानो मिडियामा यस्तो आयो ,फलानो नेताले यस्तो भन्यो भनेकै आधारमा अनि धेरै रे ,रे कै आधारमा ।
यस्तो अवस्यामा अनिद्रा, विषाद्, चिन्ता र नकारात्मक धारणाको बाढी नै पनि आउन सक्छ। तर युवास्था भनेको निरास हुने अवस्था हैन। आशावादी हुने, केही गरेर देखाउने अवस्था हो। तर धेरै युवाहरुमा के गर्ने भन्नेबारेमा थाहा नै हुदैन ,। के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारे निर्णय क्षमतामा विकास भइसकेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा साथीभाइ अथवा अरूको लहैलहैमा लागेर कतिले गलत बाटो पनि रोज्न सक्छन्।
हरेक युवालाई सिर्जनशीलतामा लगाउन र भविष्य निर्धारण गर्न सही परामर्श जरुरी हुन्छ। सही मार्गनिर्देशनको अभावमा धेरैले करियर एक्सिडेन्टको सामना गर्नुपरेको पनि हामिसँग प्रस्शतै उदाहरण्ण भेटिन्छ। अझ बढि यस्तो समस्या कलेजम पढ्ने विध्यार्थीवर्गहरुमा हुन्छ। कतिपयले सही विषयको छनौट गर्न नसक्दा भविष्य नै अन्यौल बन्न पुग्दछ। आफ्नो क्षमता के हो आफुसँग के छ त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि हरुको देखासिखिमा लाग्दा झन बढि समस्स्या हुनसक्छ।
शिक्षामा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। तर विडम्बना न त राज्यले केहि पाएको छ नत विध्याथीले नै केही प्राप्त गर्न सकेको छ। एउटा विद्यार्थीले लिएको ज्ञानको १० वर्षपछिको बजार भविष्य के हो रु विद्यार्थीले लिएको ज्ञान, सीपले उच्च व्यावसायिक सफलता हात पर्न सक्नुपर्छ ,। विद्यार्थीहरुलाई पढाइमा मात्र होइन पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु प्रमुख चुनौति हो। एकथरि युवा प्लस टु पास गर्नेवित्तिकै विदेश जान्छन्।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ११:५६ मंगलबार